Slot games-Myanmar - ibet168 ibet168 အွန်လိုင်း စလော့ဂိမ်း ဝက်ဆိုဒ်
စလော့ကစားနည်းဆိုတာ ကစားစရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စလော့ဂိမ်းတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။
စလော့ဂိမ်းတွေဟာလဲ စပေါ်ချိန်မှာ အွန်လိုင်းကနေခုလိုဆော့လို့ရလာခြင်းတော့မဟုတ်။
၁၈၉၁ ခုနှစ်မှာနယူးယောက်၊ ဘရွတ်ကလင်မှ Sittman နှင့် Pitt တို့သည်လောင်းကစားစက်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီ slot machine ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ တဖြေးဖြေးချင်း ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ အကြွေစေ့ ထည့်ပြီးဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းဆက်တွေအသွင် တဖြေးဖြေးချင်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။
စလော့ Traditional Slotတွေလက်ရှိအချိန်ထိအောင် ဆော့ကစားသူတွေနဲ့အောင်မြင်နေတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြင်အဆင်တွေ….
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်စရာတွေပါဖန်တီးလို့ရတာတွေက Traditional Slotတွေအတွက် မပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ပေးနေသလိုပါပဲ။
“Slot ဆိုတာဘာလဲ? ( What is Slot? )”
Slot စက် (Slot Machine) လို့လူသိများတဲ့ ကစားနည်းရဲ့ အစပိုင်း Standard ပုံစံက Line “1” လိုင်းနဲ့ Wheel “3” ခုပါဝင်ပြီး သစ်သီးပုံတွေနဲ့အစပြုခဲ့လို့ Fruit Machine လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့။
အကြွေစိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ မောင်းတံဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် Wheel တွေကလည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လိုင်းပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ Symbol လေးတွေရဲ့ကိုက်ညီမှုအပေါ်မှုတည်ပြီး အကြွေစိပြန်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Symbol တွေရဲ့ကိုက်ညီမှုကလဲ ကိုယ်ကစားနေတဲ့စက်အပေါ်မှုတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် စက်တိုင်းရဲ့ အပေါ် (သို့) ဘေးနားမှာ “Payout” ပြန်ရနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ Classic Slot စက် တွေမှာတော့ မောင်းတံနဲ့ဆွဲပြီးဆော့ကစားရသလိုပဲ အချို့စက်တွေမှာ ခလုပ်ဖိနှိပ်ပြီးကစားရတယ်။ ဒီစက် ၂မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချို့ Player တွေက မောင်းတံကိုဆွဲရတဲ့ ခံစားချက်ကိုကြိုက်ကြသလို အချို့ကကြတော့လဲ လွယ်လွယ်ကူကူပဲခလုပ်နှိပ်ပြီးကစားရတဲ့ ခံစားမှုကိုကြိုက်ကြလို့ Casino တွေမှာ အမျိုးအစားစုံအောင်စက်တွေကို ချပေးထားတာတွေ့ရမှာပါ။
Slot ကစားနည်းဟာ အရမ်းကိုအောင်မြင်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့ကစားဖြစ်တာကြောင့် လူမျိုးကွဲများတဲ့ မတူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲ Slot ကို ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကကွဲကြပါသေးတယ်။
ဘာလို့ Slot ဆော့သင့်တာလဲ?
Slot ကစားသင့်တဲ့အချက်တွေကများတယ်… အဲ့ထဲကအသိသာဆုံးအချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရမ်းရိုးရှင်းတယ်အခြား Casino ကစားနည်းတွေလို ရှုပ်ထွေးပြီး အငြင်းအခုန်ဖြစ်နိုင်စရာ အခြေအနေတွေမရှိဘူး။သင်္ချာအမြန်တွက်တက်ဖို့မလို၊ အာရုံများစရာမလိုပဲနဲ့ အရမ်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုမို့ပါ။
Payout rate တွေကိုလဲအလွတ်မှတ်ထားစရာမလိုပဲ စက်တိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲပြထားတာမို့ထည့်ချင်သလောက် Betting (လောင်းကြေး) ထည့်ပြီးတော့ လှည့်လိုက်တာနဲ့ လည်နေတဲ့ Slot Wheel တွေရဲ့ မီးရောင်စုံကြားမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်! (2) တစ်ယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးကစားနိုင်တယ်Casino တစ်ခုထဲခြေလှမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ကစားနည်းအားလုံးအလိုလို အခြားကစားသူများနဲ့ယှဉ်ပြီး (သို့) အတူတူကစားရတဲ့ကစားနည်းတွေများတာ တွေ့ကြမှာပါ.. ဒါပေမယ့် Slot ကစားနည်းကတော့ ကစားသူအရေအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိပဲ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး အကြွေစိတွေအပြုံလိုက်ကျလာတဲ့အသံကို မြိန်မြိန်ကြီးခံစားနိုင်ပါတယ်!
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာ အနိုင်ရရှိခြင်းကိုပဲလိုလားကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ငွေကြေးနဲ့ရင်းပြီးကစားကြတဲ့ ကစားဝိုင်းမှာ လူတိုင်းအနိုင်လိုချင်ကြတာ အပြစ်တော့မဆိုသာပါဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ရင်းရတဲ့ ကစားနည်းများဟာ အနိုင်ရရှိဖို့ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ လိုအပ်ပါတယ်။ ကံတရားကိုပဲ မျက်စိမှိတ်ပုံအပ်ရတဲ့ ကစားနည်းတွေရှိသလို ကံတရားနည်းနည်းနဲ့ ဉာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး အနိုင်ရရှိနိုင်သော ကစားနည်းကိုပြောပါဆိုလျှင်တော့ Blackjack ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာအမှန်ပါ။
Casino အများစုဟာ Blackjack Shoe တစ်ခုကို ဖဲထုပ်ရှစ်ထုပ်အထိ အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဖဲထုပ်များခြင်းဟာ ကောင်းသော အလားအလာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ ဖဲထုပ်နည်းလေ ဖဲချပ်ရေတွက်ရပိုလွယ်လေ ဒိုင်ကိုနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။
လျော်ကြေးပေးတဲ့စည်းမျဉ်း ကို သိထားခြင်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ Casino အပေါ်မူတည်ပြီး လျော်ကြေးစည်းမျဉ်းဟာ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်စကားမယ့် Siteကိုသေချာရွေးချယ် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ သင့်ကို လျော်ကြေး၂ဆပေးတဲ့စားပွဲက ၁ဆခွဲပေးတဲ့စားပွဲထက် ပိုကောင်းတာတော့ သင်ငြင်းလို့မရပါဘူး။